Wararkii ugu dambeeyey Kulankii Seddax geesoodka ahaa ka dhacay Degmada Afgooye (Xog). | Markacadey.com
Jun 12, 2015	Naftaa-quur	-
Wararkii ugu dambeeyey Kulankii Seddax geesoodka ahaa ka dhacay Degmada Afgooye (Xog).
Waxaa in Muda ah soo taagnaa Muranka Maamulka loo sameyno Degmada Marka iyadoona kulankki shalay uu noqon lahaa natiijada kama dambeysta ah ee Mustaqbalka Maamulka.
Kulnka oo ahaa mid Seddax geesood ah oo ka dhacay Degmada Afgooye ayaa waxa wada yeelanayey Suldaanka Beesha BiimaalSuldaan Ibraahin Cali Xaaji,Wasiirka Wasaarada Beeraha Mudane Maxamed Xasan Fiqi iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxana kulanka dibad jog ka ahaa Wasiirada kale ee deegaanka u matasha Koonfur galbeed iyo Odayaal kale.
Kulanka ayaa ku furmay sida aan xogta ku helnay in Shariif Sakiin looga xoga waramo Wadatshigii ugu dambeeya ee ay soo yeesheen marjaca Beesha Biimaal iyo sida ugu fudud ee loogu dhawaaqayo Maaulka Degmada Marka.
Shriif ayaa Wasiirka iyo Odayaasha weydiistay siday ugu talagaleen xubnaha Maamulka Cusub iyagoona u sheegay siday isugu soo afgarteen dadka deegaanka oo aan ka noqosha ahayn.
Wuxuu hordhigay in Shan xunbood la siiyo Beelaha Hawiye (Beelaha Dhul Balaarsiga),Gudoomiye ku xigeenka amniga ee Degmadna lagu qoro Habar Gidir (Dhul Boob) waxa mar qura fadhiga ka kacay Wasiirka Beeraha oo wax filan waa ku noqday hadalka Shariif Sakiin uu ku hadaaqay.
Sida aan kasoo xiganay ilo xog ogaal ah Shariif ayaa u sheegay Wasiirka iyo Suldaanka inaysan raali ka ahayn in Marka ay Maamul yeelato marba hadii ay diideen in Beelaha Dhul ballaarisaga Shan xubnood laga siiyo.
Maxamed Xasan ayaa ku yiri Shariif “Wixii shalay qoriga laga qaatay in Maanta dib naloogu celiyo taas waa mid aan diidnay”.
Buuq iyo qaylo ka dib waxa soo xirmay kulankii seddax geesoodka ahaa ee u dhaxeeyey Shariif Sakiin, Fiqi iyo Ibraahin Cali xaaji, waxaa mar kale dhex dhexaadin laga bilaabay sidii dib loogu laaban lahaa kulan kale si ugu yaraan loo helo isu soo dhawaansho xaga fikir ah.
Wasiir Fiq iyo Suldaan ibraahin oo dib u milacsaday go’aanka Hogaanka Ciidanka deegaanka iyo fikarka laga qabo Habar gidir (Dhul boob) ayaa dhankooda mar kale diiday in meesha lagu soo daro Habar gidir iyadoona meesha ka saaray in Shan xubnood ay ka helaan Hawiye ay tahay mid ay ka xigaan Dagaal.
Waxa hadalo kul kulul isdhaafsaday Shariif iyo Fiqi, Shariif ayaa ku goodiyey in rabitaankiisa uu noqon doono mid lagu saleeyo Maamulka iyadoona Fiqi uu u sheegay Shariif Sakiin in rabitaanka Deegaanka uu yahay mid laga talaabsan Karin.
Hadaba markaad u eegto sida uu xaalka yahay waxa soo baxaya digniino horay loogu jeediyey Odayaasha ismagacaabay iyo Wasiirada taas oo ku aadanayd in dhagarta daahsoon ee Shariif Sakiin.